Al Shabaab oo Weerar khasaara dhaliyay ka geysatay degmada Qoryooleey.
Saturday September 07, 2019 - 12:08:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaadyo xooggan oo xalay deegaan katirsan gobolka Sh/Hoose ku dhaxmaray ciidamada Xarakada Al Shabaab iyo maleeshiyaa dowladda katirsan.
Wararka ka imaanaya degmada Qoryooleey ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo xooggan ay gudaha degmadaas xalay saqdii dhexe ka dhaceen, ciidamada Al Shabaab ayaa weeraro ku ekeeyay saldhigyadii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka dowladda.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay xalay la wareegeen inta badan magaalada waxaana gudaha Qoryooleey saaka lagu arkay meydka askari katirsan ciidamada dowladda kaas oo magaciisa lagusoo gaabiyay Aayoow Jiis.
Maleeshiyaadka dowladda ayaa markii loo itaal sheegtay ufirxaday dhanka saldhigga ciidanka Uganda ee kuyaal agagaarka Buundada degmada. Isbuucii lasoo dhaafay ayay aheyd markii dagaallo culus ay sidaan oo kale uga dhaceen degmada Qoyooleey oo kamid ah meelaha uu ka socdo loollanka ugu adag ee gobolka Sh/Hoose kajira.